Daawud Ibsaa KFOn faajjii ABO akka itti hin gargaaramne akeekkachiise - Oromia Shall be Free
Daldalli yeroo dheeraa itti daldalaa turan ka gaheef hin fakkaatu……jajjabduu dhufaa jirti…
Gareen maqaa ABOn “qaca fii shaneetti adda baate kun asiin duraas dhimma maqaa kana laalchisee ABOn dhugaa ana ana jechuun dhimma kana mana murtii biyya Ameerikaatti wal kasasaa turuun sii seenaa yeroo gabaabduuti.
Dhumarratti gareen kun bakka heddutti fofottoqee alaabuma kanaan achi bahee qilleensarratti wacaa as gahe, garee kana keessa tokko ka umrii isaa guutuu alaabaa tanaaf gatii guddaa kafalee ture dhumti isaa BAANDIRAA habashaatiin maramee awwaalame. Ta haftees PP waliin aruuza seente jirti.
Amma yeroo tokkichi Oromoon abdii irraa qabdu diyaaspoora keessa ka’ee biyyiti jala girgiru kaate gareen yeroo dheeraaf hirribarra ture alaabaan tun tiyyaa tana qabattanii babbareeddanii isa hinsimatinaa jechuu egalan. Daldalli yeroo dheeraa itti daldalaa turan ka gaheef hin fakkaatu……jajjabduu dhufaa jirti…hawaasni Oromoo alaabaa kana kaayyachuuf mirga hin qabdan jechaa jira jaarsi. Kayyachuu yoo barbaaddan waa kafaluu qabdu jechuu barbaadeetii dhiiroo?
Tags Abo alaabaa Johaar KFO
Previous Yaada “Suphaa Impaayeraa” Akka Eeboo Darbatame
Next Obboo Kaalid Bakar guyyaa har’aa Sadarkaa Idil-Addunyaatti International Champions Booksii injifate